Venezoelà: Ilay Poeta Nankafy ireo Zavatra Tsotra teo amin’ny Fiainana · Global Voices teny Malagasy
Venezoelà: Ilay Poeta Nankafy ireo Zavatra Tsotra teo amin'ny Fiainana
Voadika ny 31 Oktobra 2018 17:29 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra Anglisy nivoaka tamin'ny Mey 2008 ity lahatsoratra ity)
Ity herinandro ito no nanamarika ny tsingerintaona nahaterahan'i Aquiles Nazoa, poeta Venezoeliana efa nodimandry, saingy tsy tahaka ireo taona hafa izay nisianà lanonana maro satria dia toa nangìna ny fiainana ara-kolontsaina tao Caracas. Roa taona lasa izay, manodidina ireo daty ireo, nisy seho feno hatsikana sy tsiaro an'ilay poeta, izay nanoratra momba ireo zavatra tsotra teo amin'ny fiainana.
Niaina tanaty fahatsorana hatrany i Nazoa. Naneho ny hakanton'ny andavanandro sy ny fanahy mahatsikaiky misy ao anatin'ny Venezoeliana rehetra izy. Isan'ireo tena nafana fo mafy tamin'ny fiarovana ny Zon'Olombelona ihany koa izy nandritra ny taompolo 60 tao Venezoelà ary nitaratra ny fitiavany ny vahoakany izany tanatin'ny tononkalony. Nandrakotra sarinà lova nentin-drazana, lalaon'ankizy, loko, ary nofinofy ny asa sorany, kanefa tsy nanilika ny olana ara-pôlitika, ny fahalalahana miteny ary ny fitsikeràna ny madiotanana tamin'izany fotoana. Izany rehetra izany dia voarakotra hatsikana maranitra sy malefaka no maneho ny maha-Venezoeliana. Ary araka ny voasoratr'i Dulceambar [es] (rohy maty), mitondra hehy ho an'ny maro ny asa sorany. Tsaroan'ny maro i Nazoa, ary manoratra i Poética del Empedrao [es] (rohy maty) fa ny fankasitrahan'ny vahoakany azy mandrakizay no zava-bitany lehibe indrindra.
Araka an'i Kalafia [es] (rohy maty), ny 25 Aprily no nanamarika ny faha-25 taona nahalasanany. Manoritsoritra an'i Nozoa toy izao izy:
Tena mpampianatra i Nazoa, ilay iray manolotra ny fanahiny ho eo am-pelatànan'ny mpianany. Nihaona taminy izahay tany amin'ny Sampam-pampianarana ny Haikanto (UCV) ary tany no nampianarany anay ny tsiambaratelon'ny fiainan'ireo saribakoly sy anjely, ny zava-miafina ambadiky ny fanidinan'ny angidina eo ambony renirano. Te hanome voninahitra azy izahay ankehitriny, ilay poeta nantsoina tamim-bazivazy hoe “Rossignol-n'i Cantuche” satria izy no mpanoratra tononkalo nahay nanakatra sy naneho indrindra ny fihetsehampo madio indrindra ananan'ireo Venezoeliana, zavatra tianay antsoina hoe “ny feon'ny fieritreretam-pirenena”. Ny naha-Venezoeliana azy no nahatonga azy ho poeta tahaka izao, mahatsikaiky, malalaka.
Manome antsipiriam-piainany vitsivitsy ny bilaogy Ilustres [es] (rohy maty). Eto isika dia mahafantatra ireo zava-bitany farany, izay tena goavana:
Nandritra ny taompolo 70, ankoatra ny fanomanana boky tahaka ny (Fiainana miafin'ireo saribakoly voridamba, Raul Santana sy ny tanàna anatin'ny paosiny, ary I Leoncio Martínez mahafinaritra sady fetsy) dia nanao lahateny sy zaikabe izy, manolotra fandaharana antsoina hoe Simple things (Zavatra Tsotra) ary manampy amin'ny fanofanana vondrona mpanao tantara an-tsehatra , ny “theater to read” (teatra hovakiana). Nodimandry tanatinà lozam-pifamoivoizana izy. Ho fahatsiarovana azy, ary tamin'ny alàlan'ny tolokevitr'i Pedro León Zapata, noforonina ny toerana “Aquiles Nazoa” tao amin'ny anjerimanontolo, izay natomboka ny 11 Martsa 1980.
Anivon'ireo sanganasany ireo tantara mahatsikaiky marobe nosoratana ho andininy holalaovina an-tsehatra, miaraka amin'ireo dika vaovao toa an'i Hernani sy Cinderella, ankoatra ireo hafa maneso ny fiainana anaty fanambadiana sy ireo andriambavilanitra “ambony” miaraka amin'ny “vola vaovaony” ho fitsikeràna ny madiotanana vaovao. Eto ny ampahan'ny Cinderella nataony ao amin'ny YouTube [es].
Tena fanahy nahafinaritra tokoa ho an'ny vatana Venezoeliana i Aquiles Nazoa. Loka maro teo amin'ny sehatry ny asa soratra ary fianarana ambaratonga voalohany maro no nomena ny anarany. Maminy ny ankizy, ny vahoaka, ny kisoa ary ny alika. Nanolo-tena manokana ho an'ny fanabeazana ny vahoaka sy niady ho an'ny fahamarinana izy. Ary koa satria tsy feno ity lahatsoratra ity raha tsy misy ohatra iray avy amin'ny asa sorany, ndeha hanao ezaka amin'ny fandikanteny ny haisoratra ary hanome ity toerana ity ampahany kely avy amin'ilay poeta:
Ireto misy matoanteny vitsivitsy izay, miadana tahaka ny sokatra,
Ary satria matahotra noho ny tsy fisian'antoka ny rehetra
Tsy manoratra aho
Tsy manoratra ianao
Tsy manoratra izy
Fa raha misy iray manoratra izay eritreritra rehetra voatahiry anaty
Afaka jerena eto ny tantaram-piainany sy ny tononkalony hafa (amin'ny teny Espaniola).
Farany, manana fahatsiarovana mamy ny fahazazany miaraka amin'ny andinin-tononkalo nosoratan'i Nazoa ireo bilaogera sasany. Manoratra i Plomo al Arpa [es]:
Tao amin'ny San Juan Bautista de La Salle (Lisea) manoloana ny Kianja Capuchinos ary akaikin'ny Sekoly Zamora taloha aho no nianatra nandritra ny fiainako manontolo. (…) Noho izany, nihalehibe niaraka tamin'ireo vahoaka ireo aho ary zary tsy vaovao tamiko ny maritrano, tamin'ny filalaovana tany an-kianja, miaraka amin'ireo andry tsara vita avy amin'ny biriky sy voaravaka hazo, ireo voromailala sy ireo mamolahy, izay mitaratra tantara kely avy aminà boky malaza antsoina hoe Humor y amor (Hatsikana sy fitiavana). Nahatsapa tena akaiky an'io boky io aho, satria avy amin'ireo rehetra novakiako dia niverenako niainana avokoa ireo zavatra rehetra tsapako raha izah nizotra ho any an-tsekoly, ireo lalaon-jaza fanaoko tany anaty saha ngazana, sy ireo dia nataoko manerana ireo trano antitra rehetra rehefa voairaka iny aho. Indray andro, nandalo teo ambany masoko ny tononkalo iray momba ny tranom-boromailala tao amin'ny Kianja Capuchinos ary nieritreritra aho fa singa iray mahafinaritra ny nahafahan'ilay poeta nanokana andalana vitsivitsy ho an'ny lalaoko sy ny fotoana nitsoahako ny sekoly. Taorian'izay, fantatro fa sady nandia ireo arabe nodiaviko io poeta io no nianatra teo akaikin'ny toerana nianarako ary namorona tontolo iray feno miaraka amin'ireo zavatra tsotra indrindra hitany, ny ankamaroan'izy ireny dia ampahany tamin'ny fahazazako ihany koa. (…) Ilay poetan'ny zavatra tsotra, ilay iray izay nahatonga ahy ho babo indray amin'ny tanànako sy i San Juan malalako. Miarahaba anao amin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahanao ry Aquiles!